Shina : Fetiben’ny Henan’Alika- Heloka Sa Kolontsaina ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2014 15:42 GMT
Sakafo matsiro aroso ambony latabatra fihinanana any amin'ny faritra sasany ao Shina ny henan'alika, ary efa hatramin'ny nanodidina ny taona 500 talohan'i Jesoa na mety efa taloha be aza ny fihinanana izany. Kanefa, satria efa maro no manomboka mitaiza alika tsikelikely ho biby fiompy ao an-trano ny Shinoa amin'izao fotoana izao, heverin'izy ireo fa hadalàna na fitondran-tena barabara ny fihinanana henan'alika.
Taona vitsivitsy lasa izay, nanao fanentanana marobe momba ny fanoherana ny fihinanana henan'alika tao amin'ny aterineto sy tamin'ny fomba hafa ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby. Isan-taona dia mitaky ny fanafoanana ny fetiben'ny hena alika fanao isan-taona izay hihinanana lasopy amin'ny henan'alika miaraka amin'ny laodsia sy fisotroana rano mahery ry zareo. Atao amin'ny 21 Jona amin'ity taona ity any Yulin, faritanin'i Guangxi amin'ny solistisin'ny fahavaratra amin'ny tetiandro manaraka ny volana ny lanonana. Amin'ny lafiny iray dia hizingizinin'ny tompontany fa isan'ny kolontsaina anànan'ny tanàna sy fomba amam-panao ilay lanonam-be.
Tamin'ny taona lasa, novinavinain'ny mpiaro ny zon'ny byby ho maherin'ny 10.000 ny isan'ny alika maty nandritra ilay fetibe. Ity ambany ity ny fanomanana ny henan'alika tamin'ny fetibe tamin'ny 2013 araka ny tatitra nataon'ny Apple Daily:
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana May ny fanoherana ny fihinanana ny henan'alika amin'ity taona ity. Olo-malaza maromaro toa an'i Chen Kun sy Yang M no nitabataba ho fanafoanana ilay fetibe nanomboka teo. Arakaraky ny hanatonan'ilay fetibe no anombohan'ny fandefasan'ny Shinoa bitsika ao amin'ny Sina Weibo. Inty misy santionanà fanentanana nosoratanà mpisera amin'ny Weibo “Singing Feifei” (@踏歌的菲菲) miaraka aminà sary apetaka anankiroa :
Sary apetaka anankiroa manohitra ny fetiben'ny fihinanana henan'alika miparitaka amin'ny Weibo. Avy amin'i “Singer Feifei” Weibo.
Nahoana isika no manao ny fetiben'ny fihinanana henan'alika ? Alaivo sary an-tsaina hoe io misy olona atao anaty vy makarakara sady mijery ny sasany ho vonoina mandra-piandry izay anjarany. Hita anaty masony ny fananam-panantenana.
Nandeha tany Yulin ireo mpiaro ny zon'ny biby, miaraka amin'ny fanohanana mafonja, mba hanentana ny governemanta ao an-toerana handràra ilay fetibe. Fa ankoatry ny fanehoana ny drafitra momba ny fiarovana ny zon'ny biby dia nampahafantarin'izy ireo ny haraton'aina sy ny antony araka ny lalàna araka ny didy tamin'ny taona lasa navoakan'ny Ministeran'ny Fambolena momba ny fanokanana efapolo andro ny saka sy ny alika any aminà laboratoara mialohan'ny hitaterana azy. Koa satria 200 yuan ka hatramin'ny 300 yuan ( manodidina ny 30-48 dolara amerikana) isaky ny alika ny vidin'ny fanokanana efapolo andro, tsy misy mponina ao an-toerana vonona handoa izany.
Mba hialàna amin'ny fiampangana hoe ireo mpitondra no mandrisika ny fihinanana tsy ara-dalàna ny henan'alika dia nandefa fanambarana tamin'ny gazety ny governemantan'i Yulin tamin'ny 6 Jona izay milaza fa ” tsy misy zavatra tahaka ny “fetiben'ny henan'alika sy laodisia amin'ny solistisin'ny fahavaratra” ary io antsoina hoe fetibe io dia” tsy ny governemanta na ny fiarahamonim-pirenena mihitsy no mikarakara azy…. endrika fivoriana sosialy mandritry ny solistisin'ny fahavaratra izy io”.
Raha toa ka manasa tànana amin'ilay fetibe ny governemantan'i Yulin, ireo mpankafy ny henan'alika sy ny mponina any Yulin kosa dia mamaly bontana ary milaza fa tsy manan-jo handrara ny olona tsy hihinana henan'alika ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby.
Ahitana akony betsaka ao amin'ny haino aman-jery sosialy ny kolontsaina momba ny sakafo shinoa sy ny fiarovana ny zon'ny tsirairay. Ohatra, izao no nolazain'i ” Xiya protector” (@希瓦的守护):
Tia alika aho ary tsy nihinana henan'alika velively, fa tsy hitako izay antony hanakanana ny vahoakan'i Yulin tsy hihinana henan'alika.Tsy afaka mandà ny safidin'ny hafa ny tsirairay satria izay no tiany.
Inoan'i Lu Daheng (@卢-达恒) fa taratry ny tsy fitovian'ny kolontsaina io tsy fifanarahana io :
Lu Daheng: Naman'ny olona ny alika ka azo hohanina. Hevitra avy any amin'ny tandrefana ny toy izany. Fomban-drazana ao an-tànanan'i Yulin ny fetibe fihinanana henan'alika. Araka izany tsy avy amin'ny fifandraisan'ny olona sy ny alika ny hevitra hoe tokony tsy ho fihinana ny henan'alika, fa tsy fitovian-kevitra amin'ny tandrefana sy ny tatsinanana.
Ny haraton'aina hatramin'izao no tohan-kevitra mandresy lahatra indrindra. Ny marimaritra iraisana no rafitra mety ho tsara apetraka mba hianthana ny maha azo antoka ny henan'alika fa tsy ny fandraràna tsotra izao. Nanolo-kevitra tao amin'ny Weibo i Lui Lang, mpitsabo :
Raha tiantsina ny hantona ny maha-azo antoka ny henan'alika dia tokony ho arahana maso ny toerana fiompiana izany. Tokony ho fantatra ny alika tsirairay, ka raha toa ka misy tsy mety dia azo atao ny manao dia mianoatra hatrany amin'ny toeram-piompiana. Tokony hatao vaksiny sy omena odi-katsentsitra ny alika […] Raha toa tanteraka ny fepetra rehetra, ho lafo noho ny henan'omby ny henan'alika.
Fa tsy faly tamin'ny fifanarahana ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby. Nitabataba i Disaur :
Hobodoinay ny fetiben'ny henan'alika sy ny fihinanana izany. Tsy hihinana alika mandrakizay izahay. Marina fa fahalalahan'ny tsirairay ny fihinanana henan'alika ary tsy manan-jo hiditra amin'izany izahay. Fa tsy maintsy bodoinay ny fetiben'ny henan'alika, melohinay ny mpamono sy ny mpivarotra alika. Tsy azo ekena ny hanaovana ho ara-dalàna ny fivarotana sy ny famonoana saka sy alika […]